ကျယ်ပြန့်စွာ (နှင့်) အကန့်အသတ်ဖြင့်ပြင်ဆင်
ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဆိုင်သော (နှင့်) လက်တွေ့တရားနှင့် ဆိုင်သောပြင်ဆင်
ထိပ်တိုက်တွေ့စွာ (နှင့်) ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်၍ပြင်ဆင်
Vertical integration ( စနစ်၏ လုပ်ဆောင်ပုံ တိုးချဲ့ခြင်း[ဘာသာပြန်လိုအပ်ချက် ရှိသည်] )ပြင်ဆင်
↑ Jackson, R. H. 2005. "The Evolution of World Society" in The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, edited by P. Owens. J. Baylis and S. Smith. Oxford: Oxford University Press. p. 53. ISBN 1-56584-727-X.[စိစစ်အတည်ပြုရန် လိုအပ်သည်]
၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။